Maalinta farxadda adduunka iyo xaalka waddamada carbeed | Saxil News Network
March 21, 2021 - Written by admin
Hargaysa (Saxilnews.com)-Haddaba maalinta farxadda dunida oo Sabtidi shalay ahayd ku beegneyd waxaa baraha bulshada la isku dhaafsanayey mowduucyo la xiriira farxadda gaar ahaanna farxadda ka jirta waddamada carabta.
Sideedaba micnaha farxaddu waa mid ay dadku ay ku kala duwan yihiin ama farxadda qofba si ayuu u yaqaannaa waddamadana sida oo kale waa ay ku kala duwan yihiin.
Balse qaramada midoobay oo maalintan farxadda dunida asteysay waxay ku macneysay ‘qofka sida uu noolashiisa ugu faraxsan yahay’.
Laga soo billaabo 2012-kii qaramada midoobay waxay soo saareysay warbixin sanadla ah oo ay ku muujineysay cabiirka farxadda ee u yaalla waddamada dunida.
Shuruudaha farxadda lagu cabbirana waxay qaramada midoobay ay ku soo koobtay lix shuruudood, kuwaasoo kala ah wadarta wax soo saarka gudaha (GDP), celcelis ahaan da’da ay dadku noolaadaan, xorriyadda ay u haystaan go’aan gaadhidda, waxaa intaasi wehliya tayada adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka, musuqmaasuq la’aanta iyo heerka caddaaladda.
Balse warbixinta sanadkan qaramada midoobay ay ka diyaarisay farxadda adduunka waxaa lagu saleeyey sida uu cudurka safmarka ee korona fayras uu noolasha dadka u saameeyey iyo sida ay dowladaha safmarkaasi uga jawaabeen.
149 dal oo warbixinta daraasadda lagu soo qaatay waxaa sanadkan 2021-ka dalka dunida ugu farxadda badan ay marki afaraad u dooratay dalka Finland.
Si kastaba ha ahaatee, xaaladda 22 dal waxay ahayd mid wanaagsan. Waddama dhowr ah oo ku yaalla qaaradda Aasiya wey ka wanaagsanaayeen kaalmihi ay sanadkii hore galeen, halka Shiinaha oo sanadki hore ku jiray kaalinta 94-aad uu sanadkan galay kaalinta 84-aad.
Finland “Kaalinta ugu horreyso ayey ka gashay dadaalka ay u gashay badbaadinta arrimaha ay muwaaddiniintu ka mideysan yihiin ee quseeya noolasha iyo hab-noolaleedka bulshada inta uu socday cudurka safmarka” ayey yirahdeen khubarada daraasadda sameysay.
Hase yeeshee, hal dal oo waddamada carabta ka mid ah kuma jiro 10-ka dal ee farxadda dunida sanadkan ugu horreeya ee la shaaciyey. Inkasta oo liiska waddamada carabta si gooni keligood loo diyaariyey ay kalmaha ugu horreya uga jiraan waddamada khaliijka.
Wakaaladda wararka ee Faransiiska waxay sheegtay, khubaradu iney sheegeen warbixinti kal hore ay diyaariyeen marka la barbar dhigo cilmi-baadhayaashu iney ogaadeen cudurka safmarka ee Covid-19 seddex meelood meel waddamada dunida inuu saameyn taban uu u geystay.
Qoraalka sawirka,New Zealand waa dalka keli ah ee waddamada midowga yurub ka baxsan ee ka mid noqday 10-ka dal ee duniga ugu farxadda badan
Warbixinta qaramada midoobay ay soo saartay 10-ka dal ee ugu farxadda badan waxay ku sheegtay iney yihiin:
Waddamada Carabta inkasta oo ay 10-ka dal ee dunida ugu farxadda badan soo gelin haddana 149 dal ee dunida Imaaraadka wuxuu kaga jiraa kaalinta 25-aad, halka Sacuudigana uu kaalinta 26-aad uu kaga jiro.
Turkigana wuxuu ku jiraa kaalinta 104-aad, Pakistan kaalinta 105-aad halka dalka Afghaanistaanna uu galay kaalinta 149-aad ee ugu dambeysa.